ADY AMIN’NY HERISETRA : Nanamafy ny fanentanana tao Bekily Ramatoa Mialy Rajoelina
Mitohy hatrany ny fitsidihana any amin’ny tapany atsimon’ny Nosy iny izay tanterahin-dRamatoa Mialy Rajoelina vadin’ny Filoham-pirenena sady filohan’ny Fikambanana Fitia, ary Masoivohon’ ny ady amin’ny herisetra mifototra amin’ny mahalahy na mahavavy. 26 novembre 2020
Ny alarobia 25 novambra 2020 dia tonga tao amin’ny Distrikan’i Bekily Faritra Androy ihany koa izy. Nanamafy ny ady amin’ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy sy amin’ireo zaza tsy ampy taona, na lahy io na vavy izy. Marihina moa fa io omaly io no andro iraisam-pirenena iadiana amin’ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy, nanamarika izany tao Bekily ny vadin’ny Filoham-pirenena.
Tsy mitsahatra manentana ny mpiara-belona aminy Ramatoa Mialy Rajoelina amin’ny firaisan-kina hamongotra ny herisetra mahazo vahana diso tafahoatra ankehitriny. Nandritra ny fitsidihana tao Bekily dia niara-nihiaka tamin’ny vehivavy tao an-toerana izy tamin’ny hoe : “Ny herisetra atao aminay, tsy ekenay, aoka izay”. Tsy azo ekena velively ny herisetra na amin’ny endriny toy inona na toy inona. Matetika moa ny any amin’ny Faritra Atsimon’ny Nosy iny dia saika noterena hanambady aloha loatra mialoha ny fotoana ny ankizy.
Miteraka marobe ary dia voahosihosy tanteraka ny maha-olona. Nanambara noho izany Ramatoa Mialy Rajoelina fa efa endrika herisetra izany ka tokony holavina tanteraka ny fampanjakana azy. Entanina ny vehivavy mba hanatona ny toeram-pitsaboana, hazoto handrindra fiterahana fa mahasoa izany. “Eo anatrehan’ny herisetra fanolanana nisesilany toy ny tao Taolagnaro sy Toliara ireny, hoy izy, dia tokony ho sahy mijoro, mitoroka amin’ny manam-pahefana avy hatrany ny tsirairay”. Vonona mandrakariva kosa izy hiaro ny zaza amam-behivavy eto Madagasikara.
Ankoatra io ihany koa dia nanolotra sakafo, koba feno otrikaina ho an’ny zaza sy ny olon-dehibe izay tena miady mafy amin’ny Kere tao Bekily ny Fikambanana Fitia.